Ithanga multivarka: 4 zokupheka elula
Esinye sezipho eyinhloko ekwindla Kungashiwo kufanele kubhekwe ithanga. It hhayi kuphela ejabulisa iso, kodwa futhi enempilo kakhulu. Futhi okubaluleke - izithelo zalo ingagcinwa bacishe bayifunda yonke ebusika. Njengoba kungenziwa kuphekwe isobho, kanti owesibili, futhi yebo, dessert. Futhi ukudla ngakunye, kuncike isinongo ithanga ukudlala ngemibala ezintsha ukunambitha. Konke kuncike nezinye izingxenye izitsha. Futhi, noma yisiphi sazo ingalungiswa e multivarka.
Njengoba lena yemifino kuhle amnandi, avame kuwo ukulungiselela nama-dessert. Futhi, mhlawumbe ethandwa kakhulu wabo - ukuthi ephekwe multivarka ithanga. Pheka ke silula. Okokuqala udinga ukususa uqweqwe kusukela ithanga ukususa imbewu. Khona-ke uthathe cubes ezinkulu bese efakwa multivarku. Engeza ke isigamu multistakana amanzi. Khetha "Baking" upheke ithanga 30 amaminithi. Kungaba indlela noma wenze smoothie for izinyane. Optionally, ungakwazi uthele uju, engeza steamed omisiwe noma phansi namantongomane. It uphendulela dessert elula, esihlwabusayo futhi unempilo.
Kodwa hhayi kuphela nama-dessert amnandi kungenziwa kuphekwe ithanga. It ukungezwa isidlo yesibili kuwenza ukunambitheka egqamile futhi ezithakazelisayo. Ngokwesibonelo, esihlwabusayo kakhulu okubabayo ithanga multivarka ne ubhekeni kanye obabayo. Okokuqala kubalulekile ukulungiselela yemifino, mayelana 500 amagremu ukusika tincetu eligoqiwe-ngesitimu yayo esitsheni, futhi bembalwa kakhulu amanzi pan uthele inkomishi. Ukulungisa yokukhetha "sokubilisa" nesikhathi ukusetha 20 imizuzu. Khona-ke, 100 g lisikiwe ubhekeni evuthayo kwimodi "Baking" noma "Frying" imizuzu 5-7. Engeza izinongo: Chili, rosemary, garlic olwembiza. Govuza ukubeka ithanga steamed. Ukupheka kule modi amaminithi 13-25. Ngenxa yalokho, yonke into ngizoya imizuzu 40 futhi uthole inkambo main egqamile futhi namanzi ukuthi akunandlela yokugqashula kude.
Kodwa ithanga engengaphansi okumnandi liphenduka multivarka uma ukupheka isobho kuyo. Ukuze kubalulekile ukuthatha 300 g ithanga uginindela, iyasikwa ibe yizicucwana, 100 ml yobisi, isipuni ushukela semolina. Uma uhlanganisa zonke endishini Ceramic wakufaka esitsheni-ngesitimu. Qiniseka ukuthi uthele ku multivarku amanzi bese ukhetha "kushunqe". Ilungiselela ithanga isobho imizuzu engu-15. Ngemva isignali ugaye ithanga blender ngokucwiliswa. On isicelo, engeza ukhilimu noma nocezu ibhotela.
Ngaphezu amasobho, izitsha main kanye nama-dessert ithanga multivarka "Panasonic" bangaba isithako for isiphuzo. Ngokwesibonelo, jelly simnandi kakhulu eyatholakala kusukela kwalokho yayo. I-pan Multivarki eligoqiwe ithanga amaqhafuqhafu oqoshiwe amabhilikosi e-Ingxenye 3 kuya 1. Engeza 5 izingxenye amanzi. Khetha "Baking" nesikhathi - imizuzu engu-30. Thela okuqukethwe esitsheni efanelekayo ugaye blender puree. Buyela emuva bese ukhethe "kushunqe" (imizuzu emi-5). Njengoba nje uzwa ngokuchofoza, engeza isigamu ekamelweni lokudlela wezipuni of isitashi, ziyoncibilika ngesigamu multistakana amanzi, futhi ngokushesha ugovuze. Pheka kuze isignali lapho isivalo ivaliwe.
Njengoba ubona, evamile ithanga multivarka ozuza shades entsha. Yiqiniso, lezi akuzona zonke izindlela ezingakhona. Phela, lokhu zemifino okumnandi isikhathi eside manje ngisho isisekelo amakhekhe, ophaya, Quiches kanye khekhe. Kusukela ukulungele gourmet nama-dessert, isobho eqotho futhi garnishes engavamile. Nokho, sithemba ukuthi ngandlela-thile kumelwe ziye zasabela mbuzo: "Indlela ukupheka ithanga ? E multivarka"
Iklabishi pie. Indlela Yokuphila Isikhathi zakudala futhi ezahlukeneyo kulungiselelwa lokhu dish kuya "washesha"
Idaho amazambane - iresiphi for ukunconywa side dish noma ngabe isiphi isikhathi
Wezindaba ikhekhe nge omisiwe ekhaya
Pasties namazambane: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Ikhabethe embhedeni ngezandla zakhe. Indlela yokwenza embhedeni, esakhelwe ikhabethe, ngezandla zakhe
"Uppercut uHitler": abadlali izindaba ezisuselwe izenzakalo zangempela
Berry bokubikezela. Kungani iphupho aluhlaza okwesibhakabhaka?
Yini igama lwemali, abazi zonke
Izindlela sesayithi ukukhuthazwa lwemibhalo usizo C
Gastrulation - ke ... Ukwakheka umbungu multi-egqinsiwe
Bile Medical nge-osteoarthritis ka kwedolo: Izibuyekezo
Vikela izingane zakho kusukela nomzimba ezivamile